News Collection: जनार्दनमाथि हतियार बेचेको आरोप
जनार्दनमाथि हतियार बेचेको आरोप
काठमाडौं, बैशाख ५ । अर्जुनपुत्र अभिमन्युले चक्रब्यूहभित्र छिर्ने विद्या सिके पनि बाहिर निस्कने विद्या सिक्न नपाउँदा आक्रमणको सिकार हुनुपरेको महाभारतको प्रसंग यतिबेला माओवादीसँग मेल खाएको छ।
माओवादी स्रोतका अनुसार २०६३ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच लडाकु र हतियारका सम्बन्धमा एउटा 'जेन्टलमेन्ट' सहमति भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्का एक व्यक्तिको रोहबरमा भएको उक्त सहमतिको खाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै प्रस्तुत गरेका थिए। माओवादी स्रोतका अनुसार त्यतिबेला कोइरालाले भनेका थिए– 'राजनीतिक व्यवस्थापनभन्दा हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन ज्यादै जटिल छ, तपाईले आधा हतियार र आधा लडाकु मात्र एक्स्पोज गर्नोस्।
' फेरि २०१७ साल दोहोरिन सक्ने अनुमानका आधारमा कोइरालाले यस्तो सुझाव दिएको हुनसक्ने ठान्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि हुबहु त्यही सल्लाह पालन गरे। एक्स्पोज नगरिएका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन पछि कसरी गर्ने? भन्ने सन्दर्भबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले पछि नै बताउँला भने। तर पछि यी दुई नेताबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गयो। अहिले माओवादीभित्र द्वन्द्व, विवाद र रडाकोको मूल कारण तिनै एक्स्पोज नगरिएका लडाकु एवं हतियार बन्न पुगेको छ।
ती हतियार र लडाकुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले निजी ढंगले प्रयोग गर्न खोज्दा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध त बिग्रिएको छ नै, सँगसँगै पार्टी पनि विभाजनसम्मको अवस्थामा पुगेको छ। समाचार स्रोतका अनुसार प्रचण्डद्वारा खोलाले बगाएको भनिएका ती हतियारहरू जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबाहेक अरु कसैले पत्तो नपाउने गरी लुकाइएको थियो। आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ अध्यक्ष प्रचण्डले शर्मा र पुनलाई बोलाएर भने, 'अब ती हतियार फेरि हामीलाई चाहिएला जस्तो छैन, के गर्ने?' पुनले तुरुन्तै सल्लाह दिए– क्यान्टोनमेन्टमा लगेर बुझाइदिउँ। केहीबेर घोरिँदै शर्माले सल्लाह दिए– 'मूल्यवान हतियार छन्, बिक्री पो गर्न सकिन्छ कि।' शर्माको सल्लाहमा सहमति जनाउँदै प्रचण्डले भने–जनार्दनजीले ठीक भन्नुभयो, खोलाले बगायो भनिएका हतियार फेरि बुझाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन, गोप्य रूपमा बिक्री गर्नुपर्छ, यसको जिम्मा जनार्दनजीले नै लिनोस्। त्यसपछि जनार्दन हतियार बिक्रीका लागि ग्राहक खोज्न थाले। केही तराईकै सशस्त्र समूहलाई बिक्री गरियो। केही चाहिँ इन्द्रमोहन सिग्देलको थप प्रयत्नबाट भारतका माओवादीलई दिइयो। माओवादीलाई उपलब्ध गराइएको ती हतियारबारे भारतीय दूतावास अनभिज्ञ थिएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको चार महिना नबित्दै एकजना पाँचौ श्रेणीका भारतीय माओवादी काठमाडौंको सिनामंगलमा पक्राउ परे। भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा नै पक्राउ गरिएको भनिएका उनलाई नेपाल नभएर भारतमै पक्राउ गरिएको कागजात तयार गरियो। यसरी हतियार बिक्री गरिएको सुइँको पाएपछि प्रचण्ड र भारतबीचको सम्बन्ध त बिग्रने नै भयो, सँगसँगै रामबहादुर थापालगायत मोहन वैद्य पक्ष पनि प्रचण्डसँग टाढिँदै गएको स्रोतले बताएको छ। वैद्य पक्ष ती हतियार बिक्री गर्ने समय आइनसकेको ठहरमा थियो। तर अहिलेको झगडाको बीउ भने फेरि विद्रोहमा जानका लागि चाहिने हतियार बिक्री किन गरियो? भन्ने भन्दा पनि तीन/चार हजार थान मूल्यवान हतियार बिक्री गरिएको रकम कहाँ गयो? खोइ हिसाब किताब? भन्ने मुद्दा नै रहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार वैद्य पक्ष र प्रचण्डबीच सैद्धान्तिक मुद्दा निहुँ मात्र हुन्, वैद्य पक्षले पनि सम्मानजनक समायोजन र जनपक्षीय संविधानकै कुरा अगाडि सारेको छ। संस्थापन पक्षले पनि त्यही कुरा भन्दै आएको छ। माओवादीका हतियार र लडाकुबारे पूर्ण जानकार भएका कारण तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना भाइ सुशीललाई सिटौलाको सहयोग लिएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। सिटौलाको सान्दर्भिकता हाम्रो परिवारभित्र अझै पाँच/सात वर्ष रहनेछ भन्ने गिरिजाप्रसादको सल्लाहअनुसार नै सुशीलले सिटौलालाई महामन्त्री बनाएको दाबी समाचार स्रोतको छ। बाहिर राखिएका अत्याधुनिक स्वचालित हतियारबारे कांग्रेस महामन्त्री सिटौलालाई जानकारी भए पनि उनले अहिलेसम्म त्यसबारे मुख नखोल्नुलाई पनि रहस्यमय नै मानिएको छ।